Ioanna Hmelevskaya laziwa kabanzi ezweni elaliyiSoviet Union, njengoba kuvulwe labafundi isikhathi eside "umphenyi kuyindida". Heroine wakhe njalo yawela ezincwadini ezifana Amazing abafundi umoya kude amandla wakhe zase ikhono ukuphuma ngaphandle empilweni. Wakusho edlulayo icala futhi umuzwa olukhulu amahlaya kwenza inoveli uNkk Chmielewska wamukelekile futhi bethandwa.
Amaqiniso amaningi kusukela ukuphila umlingiswa oyinhloko ezihlobene hhayi kuphela umbhali, kodwa futhi nabantu ezizungezile nezindawo ayekade. Lokhu kwenza lo mlando lifakazela amanoveli kokuvamile kuyinto bangempela ukuphila kukaJohn.
Ioanna Hmelevskaya, biography oqala ngo-Ephreli 2, 1932 ku Warsaw, nge okukhulu ukuncokola nothando likhuluma ngezinsizwa nezintombi imvelaphi yakhe etusekayo noveli "Intsha kuqala." Omunye amanoveli akhe ( "Wells okhokho", 1979) is ngqo exhumene ingobo yomlando womkhaya, okunzima ukuyiqonda ngenxa lenqwaba ubudlelwano. Ngo umbhali ogogo nomkhulu nginezingane 14, 9 zisekhona futhi baqhubeka umndeni esihle. Esikhathini inoveli, "Wells okhokho," cishe wonke iqiniso, kodwa ifa elikhulu, njengoba obonwa Ioanna Hmelevskaya uqobo.
umbhali ebuntwaneni senzeke ngaphansi kokuqondisa abesifazane 4 nje: unina, ugogo kanye obabekazi ezimbili - UTeresa futhi Lucyna. Ngenxa kugqashuka impi ngo-1939, uJohane naye uPetru bathola imfundo ekhaya ukubhekana nomamekazi wakhe Lucyna - intatheli umthombo ulwazi eminengi enomsebenzi omuhle.
Kusukela kwenkonzo etemibhalo
Ngo-1943, uJohn wathunyelwa esigodlweni sezindela boarding school, futhi ngemva kokuqeda esikoleni esiphakeme, wabhalisela at the Academy of Architecture, yena kuphothulwe ngempumelelo. Ngenxa ingqondo yabo futhi enamancoko, Ioanna Hmelevskaya baphetha ngokuthi izakhiwo - akusiyo indlela yakhe. Ngakho saba nomthelela yesonto wasendulo ngezinye Orly eFrance. Ebona lokhu wobuciko yezakhiwo, kuyaqondakala ukuthi lutho enjengayo empilweni yami akazange adale, futhi banquma ukuzama isandla sakhe izincwadi.
Ngenxa esakhiweni esidala nezigidi zabafundi bakwazi ukujabulela ubuqambi somlobi. Ioanna Hmelevskaya (isithombe umbhali nge umdlalo roulette ibekwe ngenhla) wakhipha umlingiswa oyinhloko webhayisikobho amanoveli akhe nje kuphela igama lakhe kodwa futhi izici zobuntu, izintandokazi.
Ngakho, uthando lwakhe ukugembula, wamahhashi nokudlala ibhuloho wakha sisekelo amanoveli amaningi, futhi abangane eziningi kanye nezihlobo baba prototypes yebhuku izinhlamvu. Le noveli yokuqala eyanyatheliswa ngo-1964 ngaphansi kwesihloko esithi "Ukulwela lomlilo" futhi wenza Umbhali odumile wake.
Inqubomgomo Ioanna Hmelevskaya imfihlo, futhi idluliselwe ngempumelelo Amakhasi amanoveli akhe. Babonakala kanye namadodana akhe amabili, kanye owayengumyeni wakhe kanye lover, abangane nezitha - konke labo abaseduze kwakhe empilweni yangempela.
Ngokwengxenye enkulu, umlobi ngamunye inoveli - isiqeshana okukhuluma esikhathini ezithile zeminyaka yobudala, futhi kulawo mazwe lapho empeleni wavakashela. Detective indaba dilutes izenzakalo zangempela empilweni Khmelevskoy ukuthi kudala usongo ngaphezulu, ayoliswe umuzwa elimangalisayo amahlaya.
Ngokwesibonelo, umuntu onezinwele ekhohlisayo ngokusisiza igama uDeveli, owasebenzisa ukwenza umlingiswa oyinhloko kuya mhlophe-hot, owawukhona ngempela futhi wahlala iminyaka eminingana noJowana emshadweni yombango. Wayengumngane kanye isimo lapho yena wayenamadodana amabili, tinongo umbhali kule noveli ngamunye.
Zonke asebenza naye ngesikhathi umsebenzi ehhovisi wezakhiwo sika futhi bebé "izisulu" ithalente lakhe etemibhalo. Ngenxa "intsha lokuqala" ngokwalo umbhali ethi e ibhuku ngempilo yakhe, iningi labangane bakhe nabantu ayebajwayele abe nenamancoko, ukuthethelela ukuphazamiseka yakhe ukuphila kwabo kwangasese. I nabangane abambalwa abangabulawanga abanalo ikhono ukuhlola amahlaya emisebenzini yakhe, ngaphandle ukuqashelwa nombhali, akunakwenzeka ukujabulisa wakhe ngokuthumela enkantolo.
Umbhali kanye uhlamvu wakhe
Hmelevskaya Ioanna, ogama okukhuluma ibalwa 7 amavolumu, eqinisweni ngamunye umphenyi wakhe inoveli uye wakwazi ukuvula kahle endabeni yokuphila kwakhe. Izimfanelo okuyinto esembelethile umlingisi losemcoka, umbhali kwadingeka ngokwayo: adumileyo eshayela imoto, ukubhema, ukudlala sweepstake, iya izinhlanga, okuvame ukuhamba kuyo, wayazi izilimi eziningana zaseYurophu, waba umcabango zase ilukuluku asinamingcele. Isici esiyinhloko nokungapheleli esakuzuza umbhali, noJohane amanoveli wakhe - lokhu isimo sengqondo ngawo ngokwawo, ngabanye nemicimbi okunempilo amahlaya nethemba unkillable.
Izincwadi Ioanny Hmelevskoy
I lwezincwadi uNkk Chmielewska uhlu imisebenzi engaphezu kwengu-60, kuhlanganise hhayi kuphela amanoveli umphenyi, kodwa futhi isebenza izingane, journalism kanye biography, ufanelwe nhlobo esingaphansi iyiphi indaba yokudlala.
Uma kunqunywe ukuthi yiziphi umphenyi noJowana kangcono, kuyoba nzima ukuba benze isinqumo, njengoba konke kulula kakhulu ukufunda, amahlaya elikhazimulayo futhi kugwinywe ngesikhathi esisodwa. Kodwa akubona bonke amanoveli akhe abazinikele John ezamehlela wakhe.
Ngokwesibonelo, umlingiswa oyinhloko isebenza "A isinqamu enkulu emhlabeni", "inhlanhla abayizimpumputhe, '" Eyiqiniso of Life "kuyinto umfundi wasesikoleni esiphakeme Teresken Kempinskaya, olungena esikhathini esibi, isimo iwubuphukuphuku nentombi yakhe bobbin. uchungechunge lwezincwadi ngale ntombazane ezimangalisayo like abantu babo bonke ubudala, njengoba nje kuvamile namanje ogcwele amahlaya, basonte umphenyi indaba futhi benamandla romance, esiyingqayizivele nobusha.
Njengoba Ioanna Hmelevskaya (kobufakazi kulabo abaye ukufunda amanoveli akhe oluchaza, uqinisekise ukuthi) wayecabanga ukuthi ngeke uthole ubudala, kodwa imibuzo ephikelelayo izintatheli abalandeli sikuhluphe kakhulu wakhe, wanquma uqobo ukubhala yomlando wakhe.
umbhali Iningi wesaba ukuthi omunye umuntu ngeke ikwenzele zalo, nawo onke yaphambanisa. Ngenxa yalokhu kwesaba, kwakukhona umjikelezo amanoveli kwakhe abhalwe izinkathi ezahlukene - ukusuka ngo-1994 kuya 2006. Basuke zihlukaniswa zonke ojatshuliswa olungapheli amahlaya sengqondo esiqondile ukuba ukuphila, kanye eminye imisebenzi umlobi.
Ioanna Hmelevskaya wafa 7 Okthoba 2013.
Dzheyms Dzhons: Biography, izici yokudala, amaqiniso athakazelisayo
Air Conditioning-ucezu - ikhambi elilula
Tours e Newcastle, Australia